GALLERY: Sam Ah-See v Shannon 'Shaggy' King | Central Western DailyWeatherYour 4-day local weather forecast
GALLERY: Sam Ah-See v Shannon 'Shaggy' King
Feb. 22, 2014, 11:45 a.m.
All the action from Friday night's fight at the Orange Function Centre
FIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHFIGHT NIGHT: Orange's Sam Ah-See defeats Shannon 'Shaggy' King at the Orange Function Centre on Friday night to claim his first national title. Photos: NICK MCGRATHTweetFacebook of ╳exitCENTRAL Western Daily photographer Nick McGrath was at the Orange Function Centre on Friday night as home-town hero Sam Ah-See downed Shannon 'Shaggy' King to claim the Australian National Boxing Federation super welter-weight belt.Check out his photos of the night's action.STORY: SAM AH-SEE CLAIMS NATIONAL BELT IN BRUISING BOUTVIDEO: HIGHLIGHTS OF SAM AH-SEE'S WINSTORY: WAS IT THE EIGHT COUNT WHICH DECIDED THE BELT?THE KEY ROUNDS: HOW SAM AH-SEE CLAIMED THE NATIONAL TITLETweet